Ezekiel 29 (Xhosa); Isaiah 30:3 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ngomnyaka weshumi, ngenyanga yeshumi, ngolweshumi elinesibini enyangeni leyo, kwafika ilizwi likaYehova kum lisithi,
2 Nyana womntu, bhekisa ubusoubuso bakho kuFaro ukumkani waseYiputa, uprofete ngaye, nangeYiputa yonke iphela.
3 ThethaThetha uthi, Itsho iNkosiiNkosi uYehova ukuthi, UyabonaUyabona, ndikuchasile, Faro kumkani waseYiputa, ngwenya inkulu ibuthumileyo emijelweni yayo yoMnayile, itsho ukuthi, Ngowam umlambo, ndizenzele mna.
4 Ndiya kufaka amakhonkco emihlathini yakho, ndizinamathisele emaxolweni akho iintlanzi zemijelo yakho, ndikurhole emijelweni yakho, neentlanzi zonke zemijelo yakho, ezinamathele emaxolweni akho.
5 Ndiya kukulahlela entlango, wena neentlanzi zonke zemijelo yakho. Uya kuwakuwa endle, akuyi kuhlanganiswa ubuthwe; ndikunikele ukuba ube kukudla kwamarhamncwa elizwe nokweentaka zezuluzezulu.
6 Baya kwazi bonke abemi baseYiputa ukuba ndinguYehova. Ngokokuba ibe ingumsimelelo wengcongolo kwindlu kaSirayeli.
7 Bakubambelela kuwe ngamahlamvu akho, usuka uvikiveke, ukrazule lonke igxalaba labo; uthi bakusimelela ngawe, waphuke, ugxadazelise zonke izinqe zabo.
8 Ngako oko, itsho iNkosi uYehova ukuthi, UyabonaUyabona, ndikuzisela ikrele, ndinqumle kuwe umntu nenkomo;
9 ilizweilizwe laseYiputa kube senkangala, libharhe; bazi ukuba ndinguYehova, ngenxa enokuba usithi, Umlambo ngowam, ndizenzele mna.
10 Ngako oko uyabona, ndikuchasile nemijelo yakho; ndiya kulibharhisa ilizweilizwe laseYiputa libharhe, kube senkangala, lithabathele eMigidoli, lise eSevene, lise emdeni wakwaKushi.
11 Akuyi kucanda lunyawo lwamntu kulo, akuyi kucanda nqina lankomo kulo, lingemiwa, iminyaka engamashumi amane.
12 Ndiya kulenza kube senkangala ilizweilizwe laseYiputa phakathiphakathi kwamazwe abharhileyo, ibe ngamanxuwa imizi yalo phakathiphakathi kwemizi engamanxuwa, iminyaka engamashumi amane; ndiwaphangalalisele amaYiputa ezintlangeni, ndiwachithachithe emazweni.
13 Ngokuba itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ekupheleni kweminyaka engamashumi amane, ndiya kuwabutha amaYiputa ezizweni, abephangalaliselwe kuzo;
14 ndibuyise ukuthinjwa kweYiputa, ndiwabuyise elizweni lasePatrosi, ezweni lokuvela kwawo, abe sisikumkani esiphantsi khona.
15 Ezikumkanini aya kuba sesiphantsi, angabi saziphakamisa ngokwawo phezu kweentlanga; ndiwanciphise, ukuze angazinyatheleli phantsi iintlangaiintlanga.
16 Akayi kuba saba yinkoloseko yendlu kaSirayeli, ekhumbuza ubugwenxaubugwenxa ngokubheka kwayo kuwo; azi ukuba ndiyiNkosi uYehova.
17 Kwathi ngomnyaka wamashumi omabini anesixhenxe, ngenyanga yokuqala, ngolokuqala enyangeni leyo, kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,
18 Nyana womntu, uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, impi yakhe uyisebenzise umsebenziumsebenzi omkhulu eTire. Zonke iintlokoiintloko zikhuthukile, onke amagxalaba atyabukile; ukanti akabanga namvuzo ke, yena nempi yakhe, eTire, ngenxa yomsebenzi awusebenzileyo kuyo.
19 Ngako oko, itsho iNkosiiNkosi uYehova ukuthi, UyabonaUyabona, uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli ndimnika ilizweilizwe laseYiputa, ukuba athuthe intabalala yalo, athimbe intimbo yalo, aphange ixhobaixhoba lalo, ezo zinto zibe ngumvuzo wempi yakhe.
20 Umvuzo wakhe awusebenzeleyo ndimnika ilizweilizwe laseYiputa, ngokuba baye besebenzele mna; itsho iNkosi uYehova.
21 Ngayo loo mini ndiya kuyihlumisela uphondouphondo indluindlu kaSirayeli, ndikunike ukuvulwa komlomo phakathiphakathi kwabo; bazi ukuba ndinguYehova.
The word used for 'activity,' as in ('Genesis 47:6'), in Hebrew also means 'strength' and 'virtue,' which, in the internal sense, means something that prevails,...
English: American Standard Version English: Basic English Bible English: King James Version English: World English Bible English: Young's Literal Translation Hebrew OT: BHS (Consonants & Vowels) Latin: Vulgata Clementina English: Darby Version English: Douay-Rheims English: Webster's Bible Afrikaans 1953 Arabic: Smith & Van Dyke Chinese: NCV (Simplified) Chinese: NCV (Traditional) Chinese: Union (Simplified) Chinese: Union (Traditional) Czech BKR Danish Dutch Staten Vertaling Esperanto Estonian Finnish: Bible (1776) Finnish: Pyhä Raamattu (1933/1938) French: Louis Segond (1910) French: Martin (1744) German: Elberfelder (1871) German: Elberfelder (1905) German: Luther (1545) German: Luther (1912) Greek: Modern Greek OT: LXX [A] Accented Greek OT: LXX [A] Accented Roots & Parsing Greek OT: LXX [A] Unaccented Greek OT: LXX [A] Unaccented Roots & Parsing Hebrew: Modern Hebrew OT: BHS (Consonants Only) Hrvatski prijevod Hungarian: Karoli Italian: Giovanni Diodati Bible (1649) Italian: Riveduta Bible (1927) Japanese Bible Japanese Bible (kougo) 한국 성경 (Korean) Lithuanian Malayalam Bible Myanmar/Burmese: Judson (1835) Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Portuguese: Almeida Atualizada Russian: Synodal Translation (1876) Serbian (Daničić, Karadžić) Spanish: Reina Valera (1909) Spanish: Sagradas Escrituras (1569) Swedish (1917) Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Thai: from KJV Turkish Vietnamese (1934) Xhosa
3 Ngoko ke liya kuthi igwiba likaFaro libe lidano kuni, nokuzimela ngomthunzi weYiputa kube lihlazo.
The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 30
Arcana Coelestia 1165, 2588, 5044, 6015
Learning from Affliction
Jeremiah 2:36, 37:7, 46:25